Google သည်နောက်ဆုံးထုတ် Pixel Model များအတွက် Features အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် Androidsis
Google သည် Pixel အတွက်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
G ကုမ္ပဏီကြီးသည်ရာနှင့်ချီသောသုံးစွဲသူများ၏တောင်းဆိုချက်ကိုရှာဖွေနေပုံရသည်။ စျေးကွက်ရှိသည့်အချိန်တွင် ထုတ်လုပ်သူသစ်အားလုံးနီးပါးသည်သင့်ထံမှသင်အားခိုင်မာသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည် ကရန်, ဘေးဖယ် Pixel ကစတင်နေသည် ဆော့ဖ်ဝဲကိုပိုမိုအရေးပါမှုကိုပေးပါ။ အကောင်အထည်ဖော်မှတဆင့် တိုးတက်မှုနှင့်အတူ operating system ကို, အ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကပိုခံနိုင်သောနှင့်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်.
စျေးကွက်ရှိမည်သည့်ဖုန်းကိုမဆိုအလုပ်တိုင်းလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဖန်သားပြင်များနှင့်အလွန်ကောင်းသောကင်မရာများဖြင့်အမှန်တကယ်တတ်နိုင်သည့်ကိရိယာများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အခု ဂူးဂဲလ်သည်၎င်း၏ OS ကို ပိုမို၍ အရေးပါပုံရသည် နှင့်ဖွံ့ဖြိုး လက်ရှိ Pixels အတွက်သီးသန့်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များ.
1 လက်ရှိ Pixel သည်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များရှိလိမ့်မည်
2 Pixel များအတွက်ပြောင်းလဲအမူအရာ Command များ
လက်ရှိ Pixel သည်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များရှိလိမ့်မည်
selfie ကင်မရာကိုယခုလုပ်နိုင်သည် အတိမ်အနက်ကိုပြုပြင်ခြင်းဖြင့်ပုံများဖန်တီးပါ။ ဒါကအာရုံစူးစိုက်မှုနောက်ခံပေါ်တွင်ပုံတူလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲပုံဖြစ်ပါသည်, ငါတို့သည်လည်းဖန်တီးဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှာပါ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော 3D ပုံရိပ်များ။ Selfie သည်နောက်ဆုံးပေါ်အင်္ဂါရပ်များကြောင့်သိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။
ရှေ့ကင်မရာကိုလည်းအတူအကောင်အထည်ဖော်နေသည် တိုးမြှင့်အဖြစ်မှန်နှင့်ဆက်စပ်သောအသစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့် utilities ၏ထည့်သွင်း. အထူးသက်ရောက်မှု Apple နှင့် Face Time စတိုင်လ် အဘယ်သူသည်«ဘဝယူပြီး ကိုယ်ပိုင်» ကျနော်တို့စကားပြောသူကိုပြသသောမျက်နှာပြင်အားဖြင့်။
Pixel များအတွက်ပြောင်းလဲအမူအရာ Command များ
အခြား တိုးတက်မှုများ ကျနော်တို့အာရုံစိုက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် motion Sense သည်။ Google က၎င်းကိုဗတ္တိဇံပေးသည် ရွေ့လျားမှုသို့မဟုတ်အမူအရာအသိအမှတ်ပြုမှုနည်းပညာ, အရာကျနော်တို့မျက်နှာပြင်ကိုထိစရာမလိုဘဲအမိန့်ပေးဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်။ အခုချိန်အထိ ဒီအမိန့်တော်တော်လေးအခြေခံခဲ့ကြသည် နှင့်ကန့်သတ်။ ၎င်းတို့သည်တေးဂီတသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုပြန်ဖွင့်ချိန်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးလမ်းကြောင်းတစ်ခုသာရှေ့သို့နောက်သို့ရွေ့သွားနိုင်သည်။
အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ ယခုကျွန်ုပ်တို့ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်သည် ထိတွေ့မှုအမူအရာအားဖြင့် (မျက်နှာပြင်ကိုထိစရာမလိုပဲ) ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စဟာသိပ်ကိုထူးဆန်းတာပဲမဟုတ်လား။ ငါတို့ကြိုက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ တိုက်ရိုက်စာတန်းထိုးနည်းပညာ၊ မည်သည့် application တွင်မဆိုဗွီဒီယိုများ၊ podcasts များနှင့်အသံစာတိုများသို့အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာ ၎င်းသည်ယခင် Pixel2အတွက်လည်းရရှိနိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Google သည် Pixel အတွက်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်